Olona folo no maty tany Mozambika nandritra ny fihetsiketsehan’ny FRELIMO · Global Voices teny Malagasy
Olona miisa 85 farafahavitsiny no naratra
Voadika ny 26 Septambra 2019 3:20 GMT
Olona folo no maty ary farafahakeliny 85 no naratra tamin'ny fifandonana nandritra ny fihetsiketsehana nataon'i Filipe Nyusi, filohan'ny Mozambika sady kandida indray amin'ny fifidianana. Ny 11 septambra teo no nitrangan'ny fihetsiketsehana tao an-tanàndehiben'i Nampula, any avaratry ny firenena.
Namoaka fanamarihana mikasika ny zava-nitranga ny FRELIMO, antokon'i Nyusi ny alin'ny faha-11 Septambra .
Taorian'ny voina nitranga, nanapa-kevitra ny hanala amin'ny toerany ny Komandin'ny Faritany PRM ao Nampula, Joaquim Sive ny minisitry ny atitany Basilio Monteiro. Nambara nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Tale Jeneralin'ny Inspekteran'ny Kômandy Jeneraly PRM, Moses Gueves ilay fanapaha-kevitra :
Nanokana iray minitra fahanginana ho an'ny niharam-boina i Filipe Nyusi raha niverina nanao fanentanam-pifidianana indray araka ny nasongadin'i Julião Arnaldo, mpikambana ao amin'ny antoko FRELIMO:
6 andro izayFahasalamàna